NDI GANA ASỊLA NDIGBO,”KWARA LAA!” – hoo!haa!!
Kemgbe Gọọmentị mba Gana wepụtara iwu machibidoro ndi mba ọzọ ịtụ mgbere ahịa,ụjọ jizi ndi Igbo bi na Gana.
N’agbanyeghị na iwu a kwesịrị imetụta ndi mba ọzọ nile,o doziri anya na ọ bụ sọọsọ ndi Igbo, ọkacha ndi na-agba mgbere akụkụ ahụ ụgbọala ka ha buzi n’obi.
Na mpaghara Suame-Magazine dị na Kumasi, ndi ntorọbịa Gana jizi akpọmasị were na emebisi ngwa ahịa ndi Igbo.
Nwafọ Akajiọfọ, otu onye na-azụ ahịa ebe ahụ kwuru sị, “Kemgbe izu ụka abụọ, anyị anaghị apụtanwuzi ezi. Ndi ntorọbịa Suame-Magazine agwala anyị na anyị nwaa anwaa kwodebe nso n’ụlọ ahịa anyi, ha agbaa ụlọ ahịa anyị ọkụ, bụkwaa ngwa ahịa anyị ụbụ”
Ihe butere nke a, dịka anyi siri chọputa bụ anyaụfụ ndi Gana nwere n’ebe ndi Igbo, etu ha siri bịa be ha gbagide mbọ were kara nweta ego n’azụmahịa.
Onyeisioche Otu ndiahịa ndigbo na Suame-Magazine, Mazị Kizito Ikechukwu Obiora, sịrị na ” ya bụ iwu ịtụ mgbere ahịa isi n’azụ were gosipụta ntajia anya ha maka agamnihu anyị. Iwu ahụ emetụtaghị ndi Awụsa-Fụlani nọ n’Alaba, Kumasi. O metụtaghịkwa ndi Yoroba nọ na Abuabo, Kumasi.
Mịnịnsta mba Gana na-ahụ maka azụmahịa nọ n’Abụja izu ụka gara aga were gwa Mịnịsta Naịjiriya na-ahụ maka Okwu Mba Ofesi bụ Mazị Jiofrị Onyeama na iwu ahụ emetụtaghị ụmụ amala mba ECOWAS. Mana nke bụ eziokwu bụkwa na ọ bụ ụmụ amala Naịjiriya ka e jiri mebe iwu ahụ ebe ndi Igbo bụzị ndi ọ kacha metụta.
Ha sịkwa na aka ndi ọrụ nchekwa obodo ahụ dị na ya. Na ha na-anọ na-ekiri a na-emebisi ngwa ahịa ndi Igbo ebe a na-ahapụ nke ndi Lebanọn nakw ndi si mba ndi ọzọ dị n’Afrịka dịka Bokina Faso nakwa Kenya
Previous Post: AGA-ENWE EZUMIKE NDI ỌRỤ MAKA ORIRI NDI ỤKA ALAKỤBA NA TUUSDEE NAKWA WENESDEE
Next Post: ỌDACHỊ! ỌKỤ AGBAGBUWO NDI NILE NỌ N’ỤGBỌALA NDI NJEM N’ỤZỌ ABỤJA